လျှပ်စစ် ဓာတ်အားပေးရေး အဖွဲ့ များမှ တပ်ဆင်ပေး ထားသော လျှပ်စစ် မီတာ များ၏ ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက် ခနှင့် ဒဏ်ကြေး များကို ဧပြီ ၁ ရက်မှ စ၍ ပြောင်းလဲ သတ်မှတ် လိုက်ကြောင်း စုံစမ်း သိရှိ ရသည်။ အဆိုပါ သတင်း အပေါ် တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် လျှပ်စစ် ဓာတ်အား ပေးရေး အဖွဲ့သို့ ဆက်သွယ် မေးမြန်း ခဲ့ရာ ယခင် လျှပ်စစ် မီတာ များ၏ ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက် ခမှာ ကျပ် ၅၀၀ ဖြစ်ပြီး ယခုပြောင်းလဲ သတ်မှတ် လိုက်သည့် ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက် ခမှာ ကျပ် ၁၀၀၀ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ “ မီတာထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ခ ၅၀၀ ကနေ ကျပ် ၁၀၀၀ ပြောင်းလဲ သွားတယ်။
ဧပြီလ ၁ ရက်ကစပြီး ပြောင်းတယ်လို့ သိရတယ်။ သုံးစွဲခ ယူနစ်တွေရဲ့ ကောက်ခံနှုန်း ထားတော့ မပြောင်းလဲဘူးလို့ သိရတယ်” ဟု မြို့နယ် လျှပ်စစ် ဓာတ်အားပေးရေး အဖွဲ့ တစ်ခုမှ မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံ ဆက်သွယ် မေးမြန်း ခဲ့သူ ၀န်ထမ်း တစ်ဦးက ပြောသည်။ ဒဏ်ကြေး တိုးမြှင့် သတ်မှတ် မှုမှာ ယခင်က တစ်လလျှင် ကျပ် ၁၀၀၀ အစား ကျပ် ၂၀၀၀ အဖြစ် လည်းကောင်း၊ နှစ်လလျှင် ကျပ် ၂၀၀၀ အစား ကျပ် ၃၀၀၀ အဖြစ် လည်းကောင်း၊ သုံးလလျှင် ကျပ် ၃၀၀၀ အစား ကျပ် ၅၀၀၀ အဖြစ် လည်းကောင်း တိုးမြှင့် သတ်မှတ် လိုက်ကြောင်း သိရသည်။ မီတာသုံးစွဲခ ယူနစ် နှုန်းထား များမှာ အိမ်သုံး မီတာများ တစ်ယူ နစ်လျှင် ၂၅ ကျပ်၊ လုပ်ငန်းသုံး မီတာများ တစ်ယူ နစ်လျှင် ၅၀ ကျပ်နှုန်းဖြင့် ကောက်ခံလျက် ရှိပြီး အိမ်သုံး မီတာဖြင့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင် ပါက တစ်ယူနစ်လျှင် ကျပ် ၅၀ ကောက်ခံ ဆောင်ရွက်ကြောင်း အိမ်သုံး မီတာဖြင့် စားသောက်ဆိုင် ဖွင့်ထားသူ တစ်ဦးက ပြောသည်။ အသေးစိတ် အချက် အလက် များကို မြို့နယ် လျှပ်စစ်ရုံး များတွင် ကြေညာ ထားမည် ဖြစ်ကြောင်း ၂၀၁၀ ခုနှစ် ဧပြီလ ၇ ရက်နေ့ ထုတ် News Watch ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြထာ ပါသည်။
မီတာခ ယူနစ်ဈေးတွေလဲ တက်မယ် လို့ ကြားနေရပါတယ် ခင်ဗျာ
သေပြီဆရာ ... မွဲပြီ ဆရာ ရေ ...
[move]ဖိုရမ်မှ မောင်နှမ များကို ထာဝရခင်မင်လျက် ... pooh ကောင်လေး .. :imm: [/move]
[img width=131 height=131]http://i.imgur.com/iPOo9.gif[/img]
[img width=456 height=118]http://i.imgur.com/twBcr.jpg[/img]
[move] ကြိုးတစ်ချောင်းကို ဖြတ်ဖို့လွယ်ပေးမယ့် သံယောဇဉ်ကြိုးကိုတော့ ဖျက်ဖို့တော်တော်ခက်ခဲတယ် ... [/move]
The Following User Says Thank You to pooh.kglay For This Useful Post:
04-06-2010 11:58 PM #2
ပြန်စာ -> ရွှေမြန်မာပြည် မှာ မီးလာတော့မှာလား ... ???
လျှပ်စစ်မီး မရရှိနိုင်သော ဒေသများတွင် တစ်နေ့ကျပ် ၁၅၀ ဖြင့် ၁၅ နာရီကြာ အထွန်းခံသော LED မီးအိမ် ငှားရမ်းပေးသည့် ဝန်ဆောင်မှုကို တစ် နိုင်ငံလုံး တွင် အကောင်အထည်ဖော်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း M.A. W Electronic မှ ၃၁-၃-၂၀၁၀ရက်တွင်သိရသည်။ အဆိုပါစနစ်မှာ LED မီးအိမ် ကို ဘက်ထရီဖြင့် တွဲသုံးရသော စနစ်ဖြစ်ပြီး LED မီးအိမ်တွင် မီးသီး ၂၈ လုံးပါဝင်သဖြင့် ဖယောင်းတိုင် ၃၄ တိုင်စာ အလင်းအားရှိကာ ၁၅ ပေ၊ ပေ ၃၀ ပတ်လည်အထိကို အလင်းအားဖြန့်ကြက်ပေးနိုင်ကြောင်းသိရသည်။ “မီးအိမ်ငှားရမ်းပေးတဲ့စနစ်ဆိုတာက ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်စားလှယ် ပေးထားတဲ့ဆိုင်က နေ့စဉ်နံနက်ပိုင်းမှာ ဘက်ထရီအားဖြည့်ပြီးညနေမှာ သုံးမဲ့အိမ်တွေကို လိုက်ပို့ပေးတာပါ။ ကုန်ကျစရိတ်ကို အနည်းဆုံး ဖြစ် အောင် သတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်။ ဒီလိုဆောင်ရွက်ပေးရတဲ့ အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ လျှပ်စစ်မီးမရနိုင်တဲ့ ကျေးလက်ဒေသတွေရဲ့ စွမ်းအင် လိုအပ်ချက်ကို တစ်ဖက်တစ်လမ်းက ပါဝင်ဖြည့်ဆည်းပေးချင်လို့ပါ” ဟု M.A. W Electronic မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကပြောသည်။ LED မီးအိမ်ကို ၆ ဗို့၊ 4AH ရှိ ဘက်ထရီ အသေးစားဖြင့် တွဲဖက်အသုံးပြုရကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါ LED မီးအိမ် ငှားရမ်းခြင်းစနစ်ကို ရန်ကုန်မြို့၊ ဒဂုံတောင်/မြောက်လမ်းဆုံ၊ တောင်ဒဂုံ၊ မြောက်ဒဂုံ၊ ရွှေပြည်သာ၊ လှိုင်သာယာ၊ သင်္ဃန်းကျွန်း၊ ကြည့်မြင်တိုင်၊ လှည်းကူး၊ မှော်ဘီ၊ ပဲခူးတိုင်းအတွင်းရှိ ဖြူး၊ တောင်ငူ၊ ညောင်လေးပင်၊ ဒိုက်ဦး၊ ပဲခူး-ကြံခင်း၊ ပြည်နှင့် ဧရာဝတီတိုင်းတွင် မြောင်းမြ၊ မအူပင်၊ ကျိုက်လတ်၊ ပန်းတနော်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် စစ်တွေ၊ အမ်းတို့၌ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေကြောင်း ၂၀၁၀ ခုနှစ် ဧပြီ ၈ ရက်နေ့ထုတ် ပြည်မြန်မာဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
credit by khitlunge
ဖိုရမ်မှ မောင်နှမ များကို ထာဝရ ခင်မင်လျက် ... pooh ကောင်လေး :imm:[/move]
04-09-2010 11:36 AM #3
ရန်ကုန်၌ အများပြည်သူသို့ လျှပ်စစ်မီး ဖြန့်ဝေပေးနေမှုအပေါ် နေပြည်တော်မှ စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့လာရောက်ကာ ဧပြီလဆန်းပိုင်းမှစ၍ စိစစ်ပေး လျက် ရှိနေသည်ဟု သတင်းရရှိသည်။ “ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းတွေကို ဓာတ်အား ဖြန့်ဝေပေးပုံတွေ လိုက်လံစိစစ်ပေးတာ တွေ့ရတယ်။ နေပြည်တော် က စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ လာရောက်ပြီး ရန်ကုန်မြို့အများပြည်သူမီးဖြန့်ဝေပေးတဲ့အနေအထားကို စိစစ်ပေးတာလို့ပြောပါတယ်။ လျှပ်စစ်မီး ရရှိမှုက လည်း အချိန်ပိုင်းနဲ့ပဲရနေတဲ့ အချိန်ဖြစ်လို့ ဖြန့်ဝေပေးမှုပိုင်းမှာ လုပ်ငန်းသုံး၊ အများပြည်သူ သုံးမျှတစေဖို့ အခုလိုစိစစ်တာလို့ သိရပါတယ်။ ကျွန်တ်ာတို့ ကုမ္ပဏီမှာ ထိုင်ထားတဲ့ ထရန်စဖော်မာလည်း လာရောက် စစ်ဆေးတယ်” ဟု စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးက ရှင်းပြခဲ့သည်။ မတ်လ အတွင်းက အများပြည်သူအနေဖြင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရရှိမှုမှာ အလွန်နည်းပါးခဲ့ပြီး မီး မရရှိမှုကြောင့် နောက်ဆက်တွဲ အခက်အခဲ တစ်ရပ် အဖြစ် ရေပြဿနာကိုပါ ကြုံတွေ့ခဲ့ကြရကြောင်း သိရသည်။ ဧပြီလဆန်းပိုင်းမှစ၍ လျှပ်စစ်မီးရရှိမှုမှာပျက်ချိန်၊ လာချိန် အနည်းငယ်ပုံမှန် ပြန်ဖြစ်လာခဲ့ ပြီး ရေပြဿနာကြုံတွေ့ရမှုမှာလည်း လျော့ကျသွားခဲ့ပြီဟု ရန်ကုန်မြို့နေ ပြည်သူများက ဆိုသည်။ “ပိုက်လိုင်းပြင်ဆင်မှု လုပ်နေလို့ ကျန်ခဲ့တဲ့ လပိုင်းက မီးရတာလျော့ကျခဲ့တာပါ။ အခုတော့ အများပြည်သူကို မီးပိုပေးနိုင်ပါပြီ။ ရန်ကုန်မီးအ၀င် ဓာတ်အားပမာဏပေါ်မှာ ချိန်ညှိပြီး ဖြန့်ဝေပေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက် ဓာတ်အားအ၀င်များရင် မီးရရှိမှုကောင်းမယ်၊ အ၀င်နည်းရင် မီးရရှိမှုလျော့နည်းသွားနိုင်တာမျိုးတော့ ရှိနိုင်ပါတယ်” ဟု မြို့နယ်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ရှင်းပြခဲ့ကြောင်း ၂၀၁၀ ခုနှစ် ဧပြီလ ၉ ရက်နေ့ထုတ် Bi Weekly Eleven ဂျာနယ် တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
[move]ဖိုရမ်မှ မောင်နှမ များကို ထာဝရ ခင်မင်လျက် ... pooh ကောင်လေး ... [/move]
05-06-2010 12:25 PM #4
မေလကုန်မှစ၍ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပိုမို ဖြန့်ဖြူး နိုင်တော့မည် ... (ဂယ်လား) ပျော်တယ်.
ရန်ကုန်သို့ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ပိုက်လိုင်းသစ် ဝင်ရောက်လာမှုကြောင့် လာမည့် မေလ နောက်ဆုံးပတ်မှ စတင်၍ လျှပ်စစ် ဓာတ်အားကို ပိုမို ဖြန့်ဝေ ပေးနိုင်တော့မည် ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်မြို့တော် လျှပ်စစ် ဓာတ်အားပေးရေးအဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောသည်။ ရန်ကုန်မြို့တော် အ တွင်းရှိ သဘာဝဓာတ်ငွေ့သုံး လျှပ်စစ် ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်ရေး စက်ရုံလေးရုံ ဖြစ်သည့် အင်းစိန်ရွာမ၊ အလုံ၊ သာကေတ၊ လှော်ကားတို့အတွက် ဧရာဝတီတိုင်း ရတနာ ကမ်းလွန်ရေနံတွင်းမှ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကို ၂၄ လက်မ ပိုက်လိုင်းဖြင့် သွယ်တန်း ပို့လွှတ်နိုင်တော့မည် ဖြစ်ရာ လျှပ်စစ် ဓာတ်အားကို ယခင်ထက် ပိုမိုပေးနိုင်တော့မည် ဖြစ်ကြောင်း ၂၀၁၀ ခုနှစ် မေလ ၆ ရက်နေ့ထုတ် ရန်ကုန်တိုင်း(မ်) ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြထားပါ သည်။
[move]ဖိုရမ်မှ မောင်နှမ များကို ထာဝရခင်မင်လျက် ... pooh ကောင်လေး ... :imm:[/move]
05-06-2010 12:47 PM #5
[quote author=pooh.kglay link=topic=7694.msg51953#msg51953 date=1273121708]
ဒါပေမယ်.လဲ........ဆိုတဲ.သီချင်းလေးလဲရှိသေးတာပဲ :2: :2: :2: :2:
အခုလျှပ်စစ်ဓါတ်အားခွဲစက်ရုံတွေမှာ ကက်ပက်စတာဘန်.ခ်တွေလဲ တက်ဦးမှာတဲ.
မကြာမှီလာမည်နော် ။ ။
05-14-2010 01:55 PM #6
မေလမှစ၍ ရန်ကုန်မြို့ ရပ်ကွက်အများစု လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရရှိမှု လျော့ကျလာ
ရန်ကုန်မြို့တော်၏ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဖြန့်ဝေမှုစနစ်ကို အေ၊ ဘီ၊ စီ အုပ်စုသုံးစုခွဲ၍ ပေးလျက်ရှိရာမှ မေလမှစတင်၍ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား အပြည့် အဝ ရရှိတော့မည်ဟု ဧပြီလ တတိယပတ်တွင် သတင်းများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော်လည်း မေလတွင် ယခင်စနစ်ဟောင်းဖြစ်သော အေ၊ ဘီ၊ စီအုပ်စု သုံးစုစနစ်ဖြင့်သာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို ဖြန့်ဝေပေးလျှက်ရှိသည်။ မြို့နယ်လျှပ်စစ်ရုံးများရှေ့တွင် မေလအတွက် အေ၊ ဘီ၊ စီအုပ်စု သုံးစုဖြင့်သာ လျှပ်စစ်မီးပေးမည့် အစီအစဉ်ကို ကြေညာပေးထားပြီး စီဒီချပ်အဟောင်းများဖြင့်လည်း နေ့အလိုက် လျှပ်စစ်မီးပေးမည့် အစီအစဉ်ကို ကြေညာထားသည်ဟု ဆိုသည်။ “ အဲဒီနေ့မှာ မနက်(၅)နာရီက (၁၁)နာရီကို C(A)၊ နံနက် (၁၁)နာရီက ညနေ (၅)နာရီကို A(B)၊ ညနေ(၅)နာရီ က ည(၁၁)နာရီကို B(C)၊ ည (၁၁)နာရီကနေ နောက်နေ့ နံနက်(၁၁)နာရီအထိ A+B+C။ အဲဒီလို ကြေညာထားရင် အုပ်စု B ဟာ မနက် (၅)နာရီ က (၁၁)နာရီပဲ မီးပျက်မယ်။ ကျန်တဲ့အချိန် မီးလာမယ်ဆိုပြီး အားလုံးကထင်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် ကွင်းနဲ့ပြထားတဲ့ အဓိပ္ပါယ်က လျှပ်စစ်ဓာတ်အား အဝင်များရင်ရမယ်။ အဝင်နည်းရင် မရဘူးဆိုပြီး လျှပ်စစ်ရုံးက ပြောတယ်။ မေလထဲမှာ တစ်အုပ်စု တစ်ရက်ကို လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ၁၈ နာရီရမည် ဆိုပေမဲ့ တကယ့်လက်တွေ့မှာ မရပါဘူး ”ဟု ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်နေ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား သုံးစွဲသူတစ်ဦးက ပြောသည်။ မေလဆန်းမှစ၍ မြို့တွင်း ခြောက်မြို့နယ် အပါအဝင် မြို့နယ်ရပ်ကွက် အများစုသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိမှု အနည်းဆုံး အခြေအနေသို့ ရောက်ရှိပြီး မြို့တွင်းလမ်းမ လမ်းကျယ်များ၌ လျှပ်စစ်မီးအား အဝင် (၁၀၀) ကျော်သာ ရှိ၍ လျှပ်စစ်မီးနှင့် လုပ်ကိုင်ရသော လုပ်ငန်းများသည် မီးစက်ကြီးများကိုသာ အားကိုးနေရကြောင်းကို ၂၀၁၀ ခုနှစ် မေလ ၁၆ ရက်နေ့ထုတ် 24/7 News ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြ ထား သည်။
credit by ခောတ်လူငယ် ...
[move]ဖိုရမ်မှ မောင်နှမ များကို ထာဝရ ခင်မင်လျက် ... poohကောင်လေး ... :imm:[/move]
05-28-2010 06:53 PM #7
ဘင်္ဂလာဒေ့ခ်ျနိုင်ငံသည် သူ့နိုင်ငံ အတွက် အထူးလိုအပ်နေသည့် လျှပ်စစ်မီးကို မြန်မာနိုင်ငံမှ မီဂါဝပ် ၇၀၀ ၀ယ်ယူကာ ဖြည့်ဆည်းသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း နာမည်ကြီး ဘင်္ဂလီ သတင်းစာ The Daily Ittefaq ယနေ့တွင် ရေးသားဖော်ပြသည်။ လွန်ခဲ့သော တနင်္ဂနွေနေ့က မြန်မာနိုင်ငံမှ လျှပ်စစ်မီး ၀ယ်ယူရေး ကိစ္စကို ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ အရာရှိကြီးများက မြန်မာနိုင်ငံမှ လာရောက်သော ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးစဉ် ထိုသို့ သဘောတူညီမူ ရရှိခဲ့သည်ဟု သတင်းစာက ရေးသား ဖေါ်ပြသည်။
ဘင်္ဂလာဒေ့ခ်ျနိုင်ငံ ၀န်ကြီးချုပ်အကြံပေးအရာရှိ Dr. Tawfiq-e-Elahi Chowdhury အပါအ၀င် ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့သည် မြန်မာနိုင်ငံမှ ဒါတင် Darton Ltd ကုမ္ပဏီ ဒုတိယ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဟန်ထန်းလီ ခေါင်းဆောင်သည့် အဖွဲ့ဝင် ၆ ဦးတို့ တနင်္ဂနွေ နေ့က တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနောက် အဆိုပါ သတင်း ထွက်ပေါ်လာခြင်း ဖြစ်သည်။ အလားတူ မြန်မာအဖွဲ့သည် တနင်္လာနေ့ကလည်း ဘင်္ဂလာဒေ့ခ်ျနိုင်ငံမှ Power Development Board (PDB)မှ အုပ်ချုပ်ရေးမှုးနှင့် Power Grid Company of Bangladesh (PGCB) ကုမ္ပဏီမှ ညွန်ကြားရေးမှူးနှင့်လည်း တွေ့ ဆုံခဲ့သည်ဟု ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှ လျှပ်စစ်ကို ဖလောင်းချိတ်ခရိုင် မြောက်ဘက် တက်ကနက်မြို့မှ မြန်မာဘက်သို့ ကီလိုမီတာ ၁၀၀ အတွင်း ဓါတ်အားပေးစက်ရုံတခု ထားရှိပြီး ယင်းစက်ရုံမှတဆင့် ဘင်္ဂလာသို့ရောင်းချရန် မြန်မာဘက်မှ ပြောကြားသည်ဟု သတင်းစာက ရေးသားသည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ လေးမြို့ချောင်း၊ မအီချောင်းနှင့် စိုင်းတင်ချောင်းမှ ရေအား လျှပ်စစ် မီကာဝပ် ၈၀၀ ထုပ်လုပ်နိုင် မည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါ ၈၀၀ ထဲမှ ၇၀၀ ကို ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့မှ ၀ယ်ယူမည်ဟု အဆိုပါ သတင်းစာမှ ဖော်ပြသည်။
ယခု အစီအစဉ်မှာ ၂၀၀၇ ခုနှစ်က မြန်မာနိုင်ငံမှ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ၀ယ်ယူရန် ဘင်္ဂလာဒျေ့် အစိုးရမှ စီစဉ်ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်း ပေါ်ထွက်လာသော သဘောတူညီမူ ဖြစ်သည်။ ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့နိုင်ငံသည် ယခုအခါ လျှပ်စစ် ဓါတ်အား ထုတ်လုပ်ရန် ရုရှား အကူ အညီဖြင့် နျူးကလီယားသုံး ဓါတ်ပေါင်းဖိုများ နိုင်ငံအတွင်းတွင် တည်ဆောက်ရန် စီစဉ်နေပြီး လွန်ခဲ့သော အပတ်ကလည်း အိန္ဒိယ ထရိပူရပြည်နယ်မှ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ၀ယ်ယူရန်လည်း အိန္ဒိယနှင့် သဘောတူ လက်မှတ် ရေးထိုးခဲ့သည်။
The Following User Says Thank You to dudugyi For This Useful Post:
06-08-2010 07:37 AM #8
ဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်း ပေါက်သဖြင့် ရန်ကုန်မြို့ မီးအား ကျဆင်းဦးမည်
ကမ်းလွန်သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်း ထပ်မံပေါက်သွားသည့်အတွက် ရန်ကုန်မြို့တွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဖြန့်ဖြူးမှုသည် ပုံမှန်ထက် လျော့ကျမည်ဟု ရန်ကုန်မြို့တော် လျှပ်စစ်ပေးရေးအဖွဲ့၏ တာဝန်ရှိသူက ပြောသည်။
၎င်းက “မေလ ဒုတိယပတ်ကလည်း တခါ ပိုက်ပေါက်သွားတယ်။ အဲဒီမှာ မီးတွေ ပုံမှန်ပေးနေတာ မပေးနိုင်ဖြစ်သွားတယ်။ အခုလည်း ပိုက်ပေါက်တာ ပြန်ပြင်နေတယ် မပြီးသေးဘူး၊ ပုံမှန်ထက် ကျမှာပဲ” ဟု ပြောသည်။
အဆိုပါပိုက်လိုင်းပေါက်မှုသည် ဇွန် (၂) ရက်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသော်လည်း မည်သည့်ဒေသအနီး၊ မည်သည့်ကာလတွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပြီးစီးမည်ဆိုသည်ကိုမူ အဆိုပါ တာဝန်ရှိသူက ပြောဆိုခြင်း မရှိပေ။
ရန်ကုန်မြို့ခံများ အဆိုအရ မီးလာချိန် မမှန်သည့်အပြင် လာပါကလည်း မကြာခဏ ပြတ်တောက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်နေကြောင်း သိရသည်။
“ကျနော်တို့ စမ်းချောင်း ဗားကရာ ဘုန်းကြီးကျောင်းတိုက်အနီးက နေရာတွေကို ဥပမာထားပြောရရင် မနက် (၁၁) နာရီကနေ ညနေ (၅) နာရီထိ လာတယ်လို့ ယူဆရတဲ့ ရက်တွေမှာ မီးကကြားမှာ (၄) ခါလောက်ပြတ်တယ်။ လျှပ်စစ်က အရင် ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ စာရင်းရှိတယ်လေ။ နံနက် (၁၁) နာရီမှ ညနေ (၅) နာရီထိ တအုပ်စု ဆိုရမှာပေါ့” ဟု စမ်းချောင်းမြို့နယ် နေသူတဦးက ပြောသည်။
ပြီးခဲ့သည့် မေ (၁၂) ရက်၌ ပေါက်သွားခဲ့သည့် ပိုက်လိုင်းနေရာမှာ ရေးမြို့၊ နောင်ပိုရွာအနီးတွင်ဖြစ်ကြောင်း၊ ပိုက်ပေါက်သည်မှာ မသမာသူများကြောင့် မဟုတ်ဘဲ ပိုက်များ ကြာမြင့်နေပြီ ဖြစ်သည့်အတွက် ဆွေးမြေ့ပေါက်ထွက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်မြို့တော် လျှပ်စစ်ပေးရေးအဖွဲ့၏ တာဝန်ရှိသူက ပြောသည်။ ထို့နောက် မေ (၁၄) ရက်မှစ၍ စက်မှုဇုန်များ၊ အသေးစားစက်မှု လုပ်ငန်းများကို လျှပ်စစ်ဖြတ်တောက်ရန် လုပ်ငန်းသုံးမီတာများကို ဖြုတ်သိမ်းခဲ့ကာ မေ (၂၀) တွင် ပြန်လည်တပ်ဆင်ပေးခဲ့သော်လည်း ယခုတိုင် လျှပ်စစ်မီး ပုံမှန် မရရှိသေးကြောင်း အဆိုပါတာဝန်ရှိသူက ပြောသည်။
တနင်္သာရီမှ ရန်ကုန်သို့ သွယ်ထားသော သဘာဝဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းမှာ နှစ်စဉ်ပေါက်တတ်ကြောင်း၊ ပိုက်လိုင်းများ သံချေးတက်ကာ ဆွေးမြေ့ပေါက်ထွက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့အတွက် ယခုအခါ ရတနာကမ်းလွန်ပြင်မှရသော ဓာတ်ငွေ့ကို (၂၄) လက်မအရွယ်ရှိ ပိုက်လိုင်းများဖြင့် သွယ်တန်းထားကြောင်း သိရသည်။ သွယ်တန်းထားသည့် ပိုက်လိုင်းအရှည်မှာ (၁၇၉) မိုင်ရှိပြီး ကမ်းလွန်ပိုင်းတွင် (၉၃) မိုင်၊ ကုန်းတွင်းပိုင်းအရှည် (၈၆) မိုင်ရှည်လျားကြောင်း စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန တာဝန်ရှိသူက ပြောသည်။
၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် မေလကုန်တွင် ရန်ကုန်၌ လျှပ်စစ်မီး အပြည့်ပေးမည်ဟု ပြည်တွင်း သတင်းဂျာနယ်များမှ တရားဝင်ပြောကြားထားသော်လည်း ယခုအခါ သွယ်တန်းပြီးစီးပြီဆိုသော (၂၄) လက်မ သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့ ပိုက်လိုင်းမှ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်ခြင်း လုံးဝမရှိသေးကြောင်း သိရသည်။ ဓာတ်ငွေ့မပို့လွှတ်နိုင်ခြင်းသည် လုပ်ပိုင်ခွင့်ရသော IGE ကုမ္ပဏီမှ အရည်အသွေး ပြည့်မီသော ပိုက်များကို မတပ်ဆင်သောကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ တနိုင်ငံလုံးတွင် ရေအားနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့များမှ ထုတ်လုပ်သော လျှပ်စစ်ပမာဏမှာ (၆၆၀) မဂ္ဂ၀ပ်သာရှိပြီး ရန်ကုန်တမြို့လုံး လိုအပ်သော ပမာဏမှာ မဂ္ဂါဝပ် (၇၀၀) နီးပါးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယခုရရှိသော မဂ္ဂါဝပ် (၆၆၀) မှ တ၀က်ကို ရန်ကုန်တွင် သုံးစွဲနေကြောင်း လျှပ်စစ်ပေးဝေရေး၏ မှတ်တမ်းများအရ သိရသည်။
Credit to : မျိုးချစ်သူ ၀၇ ဇွန် ၂၀၁၀။ Reference : http://www.khitpyaing.org
06-08-2010 12:58 PM #9
ပြန်စာ -> ပြန်စာ -> ရွှေမြန်မာပြည် မှာ မီးလာတော့မှာလား ... ???
[quote author=ကိုထွန်း link=topic=7694.msg54552#msg54552 date=1275955628]
ကိုးကား : မျိုးချစ်သူ ၀၇ ဇွန် ၂၀၁၀။ http://www.khitpyaing.org
(ဓါတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းရောက်ရှိနေပြီးလျှင်လည်း ဓါတ်ငွေ့တာဘိုင်တွေနှင့်ဓါတ်အားပေးစက်တွေ ဖြန့်ဖြူးရေးစနစ်အတွက်ပစ္စည်းတွေ အများကြီး တိုးမြှင့်ချဲ့ထွင်ဖို့ လိုအပ်ပါသေးတယ်)
ဘတ်ဂျက်ကလည်းခွင့်ပြုနိုင်မှ ပညာရှင်များက အချိန်ယူပြီး ၀ိုင်းဝန်းအကောင်အထည်နိုင်ကြမှာပါ။
ဥစ္စာရင်လိုဥစ္စရင်ခဲ ဆိုရိုးစကားနှင့်အညီ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားလုံလုံလောက်လောက် သုံးစွဲချင်လျှင် စုပေါင်းညီညာစွာ နည်းလမ်းတကျဖြင့် ဖိဖိစီးစီး ကျားကုတ်ကျားခဲ အားသွန် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှ အောင်မြင်ရရှိနိုင်သည်ကို မျက်ကွယ်ပြုပြီး
စင်္ကြာမင်းမျှော် ဟိုမျှော်ဒီမျှော် ၀ါသနာထုံတဲ့ ကိုရင်နက်ပြာတို့တတွေ ဂျာနယ်သတင်းတွေဖတ်ဖတ်ပြီး ပီတိတွေဝေနေခဲ့တာကြာပါပြီ။
ကျား ကျားလို့ ဟစ်အော်အကူအညီတောင်းပြီးနောက်ပြောင်တဲ့ နွားကျောင်းသားလေး ပုံပြင်ကို ဂျာနယ်ဆရာများအားလုံးလိုလို ကြားဖူးကြမှာပါဗျာ၊ သတင်းဂျာနယ်ရဲ့အလုပ်ဆိုတာ ပုံပြင်တွေပြောဖို့မဟုတ်ဘူးလို့ သူတို့လည်းသိနေမှာပါ။
ဘယ်နေရာမှာဘာတွေပဲဖြစ်ဖြစ် မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်အသင်းဝင်များအနေနှင့် အများအကျိုးပြု တိုင်းပြုပြည်ပြု လုပ်ငန်းတွေမှာ ပူးပေါင်းပါဝင် အကောင်အထည်ဖေါ်ဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်လာချိန်မှာ အကောင်အထည်ပေါ်အောင် တာဝန်ယူပံ့ပိုးပေးနိုင်သူတွေဖြစ်အောင် မိမိတို့ကိုမိမိတို့ ဦးစွာ ကြိုးပမ်းမြှင့်တင်နေကြမယ်လို့ ခံယူလျှောက်လှမ်းသင့်ကြောင်း နှိုးဆော်တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။
06-08-2010 07:18 PM #10
ရန်ကုန်မြို့တော် လျှပ်စစ် ဓာတ်အား တိုးမြှင့် ဖြန့်ဝေ မည်ဟုဆို
မိုးရာသီ ကာလ ဖြစ်သော်လည်း အချိန်ပိုင်း အလှည့်ကျ စနစ်ဖြင့်သာ လျှပ်စစ် ဓာတ်အား အသုံးပြုနေ ရသော ရန်ကုန် မြို့တော်၌ ဇွန်လ ဒုတိယပတ် နှောင်းပိုင်းမှ စတင်၍ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား တိုးမြှင့် ဖြန့်ဝေ ပေးသွားမည်ဟု ရန်ကုန်မြို့တော် လျှပ်စစ် ဓာတ်အား ပေးရေး အဖွဲ့ အကြီးတန်း အင်ဂျင်နီယာ တစ်ဦး၏ အဆိုအရ သိရသည်။ ဖျာပုံမြို့နယ် ဒေါ်ငြိမ်းကျေး ရွာမှ တစ်ဆင့် သွယ်တန်း ထားသော ၂၄ လက်မ ကမ်း လွန် သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့ ပိုက်လိုင်း များမှာ အလုံနှင့် ရွာမ တို့ရှိ သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့သုံး ဓာတ်အားပေး စက်ရုံများ အထိ သွယ်တန်း ပြီးစီးခြင်း၊ ဒေသ အနှံ့အပြားတွင် မိုးရွာသွန်းခဲ့၍ ရေအား လျှပ်စစ် ထုတ်လုပ် မှုမှာ ပြန်လည် မြင့်တက်လာခြင်းများကြောင့် ဓာတ်အား ဝင်ရောက်မှု ပိုမို များပြားလာကြောင်း ၄င်းက ဆိုသည်။ ပိုက်လိုင်း အသစ်က သွယ်ပြီး သွားပေမယ့် ဓာတ်ငွေ့ မလွှတ်သးဘူး။ ပိုက်လိုင်း အဟောင်းက ရေးမှာ ပေါက်လိုက်၊ မုဒုံမှာ ပေါက်လိုက်၊ လမိုင်းမှာ ပေါက်လိုက်ဖြစ်နေတယ်ဟု အမှတ် (၂) လျှပ်စစ် စွမ်းအား ဝန်ကြီးဌာန ထံမှ သိရှိရသည်။ ယခုနှစ် ပွင့်လင်း ရာသီကာလ အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ ဒေသ အနှံ့ အပြားတွင် အပူချိန် စံချိန်တင် မြင့်မားခဲ့ မှုကြောင့် ရေအား လျှပ်စစ် စီမံကိန်း များတွင် ထုတ်လုပ်မှု သိသာစွာ ကျဆင်းခဲ့ပြီး ပေါင်းလောင်း ရေအား လျှပ်စစ် စီမံကိန်းတွင် လျှပ်စစ် ဓာတ်အား ထုတ်ယူရန် ရေလက်ကျန် ပမာဏမှာ ၂၁ ရက်သာ ရှိကြောင်း အမှတ်(၂) လျှပ်စစ် စွမ်းအား ဝန်ကြီး ဌာနက မေလ ဆန်းပိုင်းတွင် ထုတ်ပြန်ချက်များ အရ သိရှိရကြောင်း The Voice ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
The Following User Says Thank You to kosithuag For This Useful Post:
ပြည်တွင်း/ပသင်တန်းများ သင်တန်းများ စုံစမ်းရအောင်
By Little3278 in forum သင်တန်း
Last Post: 06-09-2013, 12:52 PM
ပြည်တွင်း scholarshipများ အကြောင်း
By naruto2107 in forum ပြည်တွင်းစကော်လားရှစ်များနှင့်ပညာရေး အခွင့်အလမ်းများ
ပြည်တွင်းကစာရင်းကိုင်သင်တန်းတွေနဲ့ စာရင်းကိုင် ပညာအကြောင်းကိုသိချင်လို့
By minhtut in forum စာရင်းအင်း/ကိုင် ပညာ (Accouting / statistical section )
ထမင်းဘူးအရွယ် Desktop PC ပြည်တွင်းဝင်ရောက်
Last Post: 04-29-2010, 06:13 PM
Income Tax ကိုမြန်မာပြည်တွင် ဆောင်ချင်သူများအတွက်...သိသလောက်လေးဝေမျှပါရစေ...
By HH in forum အလုပ်အကိုင်